Chọta kọntaktị na-enweghị foto na gam akporo na Identiconizer! | Akụkọ akụrụngwa
Nye ihe oyiyi na kọntaktị na-enweghị foto na gam akporo na Identiconizer!
Kpọtụrụ kọntaktị ole ị matara nke ọma na ekwentị mkpanaaka gị? Iji nyochaa ha niile, anyị ga-aga na ngwa nke «ndepụta kọntaktị» na kọmpụta anyị, bụ nke anyị ga-achọpụta na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole n'ime ha jisiri ike idobe foto nke na-egosipụta ha nke ọma .
O di nwute na otutu n'ime ndi ana emekorita a adighi eketa foto nke choputara ha nke oma, nke a bu oge anyi aghaghi agha agha gbalịa ịchọta ha site na aha ma ọ bụ email. Ihe anyị ga-ahụ na kọntaktị ndị ahụ na-enweghị foto na listi ahụ, bụ silhouette nke a na-emeghachi na nke ọ bụla n'ime ha. Ugbu a, ọ bụrụ na anyị ejiri ngwa ọrụ mara mma nke nwere aha Identiconizer! anyị nwere ike ịdebe onyonyo iji mata ha ọsọ ọsọ.
1 Nbudata, wụnye ma hazie Identiconizer!
1.1 Identiconizer APK Download!
1.2 Nhazi Identiconizer!
1.3 Nyochaa ndepụta kọntaktị na ngwaọrụ mkpanaka anyị gam akporo
Nbudata, wụnye ma hazie Identiconizer!
Onye njirimara! Ọ bụ ngwa ọrụ emeghe maka oge ị nwere ike ịchọta ya site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye nrụpụta ya; N'ihi nke a, usoro ahụ nwere ike ịdị na-ese okwu na mbụ, agbanyeghị na nsonaazụ ya ga-abụ nke afọ ojuju zuru oke; N'ihi nke a, anyị na-akwado ka ị soro usoro ndị a iji nwee ike ibudata ma wụnye ma hazie a na-akpali gam akporo ngwa nke ahụ ga - enyere anyị aka itinye njirimara na kọntaktị ndị ahụ na ndepụta anyị na - enweghị foto nwere njikọta.
Na mbụ, ị ga-abanyerịrị ntọala gam akporo os ma gbanyụọ igbe ahụ nke na-enye gị ohere ịwụnye ngwa ịzụrụ n'èzí ụlọ ahịa ahụ.
Identiconizer APK Download!
Anyị na-akwado ka ị gafee na saịtị gọọmentị ka ị nwee ike lelee ụfọdụ atụmatụ dị na Identiconizer! nke onye mmepe ya weputara; ebe ahụ ị ga-ahụ ihe abụọ dị oke mkpa ịhọrọ; ikwesighi iju anya mgbe obula - họrọ njikọ ziri ezi iji budata ngwa a, Ga-ahọrọ naanị nke nwere agba ọbara ọbara ebe etinyere ngwa ibudata n'ụzọ zuru oke.
Nke a bụ nnukwu uru, ebe ị nwere ike nweta ya na kọmputa nkeonwe, chekwaa APK na ebe nchekwa micro SD ma mesịa mee ya ka ọ wụnye ya na sistemụ arụmọrụ gam akporo gị. Ọ bụrụ na ibudata ya na otu ngwaọrụ mkpanaka ị ga-emerịrị chọọ ụfọdụ ngwa nyocha faịlụ, Ọfọn, njehie ga-apụta site na mpaghara ngosi.
Iji Identiconizer! Gaghị ahụ ya na ibe obibi ma ọ bụ desktọọpụ nke sistemụ arụmọrụ gam akporo gị, yabụ ị ga-enyocha mpaghara nke ngwa zoro ezo; N'ebe ahụ ị nwere ike ịmasị akara ngosi nke ngwá ọrụ a, nke ị ga-ahọrọ iji tinye nhazi ya ozugbo. Ga-ahụ mpaghara ebe ị nwere ike ịhọrọ n'etiti ọtụtụ ụdị, nke na-ezo aka na nke ochie, onye ọzọ nwere ọdịdị Gmail yana nhọrọ ndị ọzọ ole na ole.
Nhọrọ ị mere na-adabere na uto na mmasị gị mgbe ị na-elele kọntaktị gị na akara ngosi.
Ọ bụ n'oge a mgbe obere aghụghọ iji mejuputa abịa, n'ihi na mgbe ịhọrọ ụdị na mmechi windo ahụ, anyị ga-agbanye nhọrọ nke na-ekwu "tinye na kọntaktị na-enweghị foto"; na nke a, mgbanwe ndị ahụ ga-adị irè ozugbo.
Nwere ike ịlele a preview nke na-arụpụta na nhọrọ a nta n'ihu ala na-ekwu "Ndi ana-akpo List".
Nyochaa ndepụta kọntaktị na ngwaọrụ mkpanaka anyị gam akporo
Ọfọn, ọ bụrụ na anyị agafeela nke ọma mgbe ahụ anyị ga-enwe ohere nke ịmasị ndepụta ịkpọtụrụ n'ụzọ dị iche karịa nke mbụ; "ndepụta aha kọntaktị" dị na mpaghara zoro ezo, belụsọ na ị debere akara ngosi na desktọọpụ gị.
Ozugbo ị họrọ ngwa si «kọntaktị ndepụta» ị ga-enwe ike ịghọta na ndị enyi ahụ enweghị foto, gosipụtara ugbu a akara ngosi dị iche, nke bụ ihe si na ihe Identiconizer! Ọ bụrụ n'ịhọrọ ụdị Gmail, ị ga-ahụ kọntaktị ndị ahụ na igbe nwere agba dị iche, ebe mkpụrụedemede mbụ nke aha ha ga-adị. Ọ bụrụ na ịhọrọ ụdị ochie ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ndị dị ugbu a na Identiconizer! Nhazi, a ga-egosipụta ihe yiri ntụpọ ma ọ bụ akara pixelated.
Na mmechi, Identiconizer! bụ ihe magburu onwe ọzọ ka nye obere kọntaktị ndị ahụ na listi anyị, nke otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ na-etinyebeghị foto na-eme ka a mata ha nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Nye ihe oyiyi na kọntaktị na-enweghị foto na gam akporo na Identiconizer!
Nyocha akara aka
Otu esi eme oku vidiyo site na Mozilla Firefox